अब मातृभूमिका लागि केही गरेर देखाउने पालो हाम्रो हो : जीवा लामिछाने (अन्तर्वार्ता ) - Janata Times
अब मातृभूमिका लागि केही गरेर देखाउने पालो हाम्रो हो : जीवा लामिछाने (अन्तर्वार्ता )
गैरआवासीय नेपाली संघके अभियानमा जीवा लामिछाने कुनै नौलो नाम होइन । विश्वभर रहेका एनआरएनलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउँदै समग्र मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा लाग्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदै आउनुभएको एनआरएनको संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष लामिछाने अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । एनआरएन स्थापना भएको डेढ दसक पुग्दा यस अवघिका प्रगति, एनआरएनको अवस्था, एनआरएन डे, विज्ञ सम्मेलन, विधान सभालगायतका विषयमा हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ;
गैरआवासीय नेपाली संघले यही अक्टोवर १२ देखि पहिलो पटक विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । विज्ञ सम्मेलनको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन भइसकेकाले अब मुलुक आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ । गैरआवासीय नेपाली समुदायको त्यसमा भूमिका रहनेछ भन्ने कुरामा मलाई सन्देह छैन । नेपालको भावी यात्रालाई सफल बनाउन हामीले संसारभरिबाट क्षमताअनुसारको साधनस्रोत जुटाएर, आफ्नो ज्ञान र सिप लगाएर ठूलो उत्साहका साथ हातेमालो गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणको यो अभियानमा योगदान गर्नका लागि विदेशमा रहेका प्रविधि, ज्ञान र क्षमतायुक्त मानव संसाधनको बढिभन्दा बढी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो । नेपालले हामीबाट यही भूमिकामा अझ व्यापक र विस्तार होस् भनेर अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले अगाडि सारेका योजनामा एनआरएनले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्ला ?
नेपालमा हुँदै गरेको राजनीतिक स्थायित्वपछि गैरआवासीय नेपालीहरुको भुमिका फेरिएको हो ?
हाम्रो अभियानको मूलमन्त्र नै ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भएकोले हाम्रो भूमिका संधै नेपालको समग्र उन्नतिमा योगदान पु¥याउने नै हो । हामीले त्यो मूल भावनालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिनु हुन्न । उद्देश्य त्यही हो । त्यसलाई निर्वाह गर्ने बाटो फरक–फरक हुन सक्ला । देशमा अहिले राजनीतिक स्थिरता कायम रहेकोले हामीलाई यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राम्रो वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु ।
वर्तमान कार्य समितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई तपाईं केही भन्नु छ ?
हामीले उठान गरेका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएर आएका छन् । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपाल सरकार र नेपालको हरेक वर्गले जिम्मेवारपूर्ण समुहको रुपमा लिएको छ । अब मातृभूमिका लागि केही गरेर देखाउने पालो हाम्रो हो । सबै साथीहरुले यो जिम्मेवारीबोध गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान गरौं ।
केन्द्रीय जाँच ब्युरो सिबिआईमा मोदीको हस्तक्षेप
भक्तपुर रेडक्रसद्धारा हनुमन्ते सरसफाई अभियानको लागि सुर्यबिनायक नगरपालिकालाई बुट हस्तान्तरण
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी भएन : घरमै सुत्केरी गराउँदा गइरहेछ भकाभक ज्यान
महोत्तरीबासीको रेल चढ्ने सपना अधुरै, इञ्जिन र डिब्बाको व्यवस्था नहुँदा सञ्चालन अनिश्चित